“ Hadii Dagaal Qarxo Iran Waa La Tirtiri…” Madaxweyne Trump | Sanaagmedia — Warar Sugan
“ Hadii Dagaal Qarxo Iran Waa La Tirtiri…” Madaxweyne Trump
June 23, 2019 - Written by admin
Madaxweyne Trump ayaa sheegay in aanu doonayn dagaal, hase yeeshee wuxu u digay Iran oo u sheegay in “la tirtiri doono” hadii dagaal qarxo.
Waraysi uu siiyey Telefishanka NBC ayuu ku sheegay in Maraykanku wadahadallo diyaar u yahay laakiin aanu aqbali doonin in Iran samaysato hub nukliyeer ah.
Waxa uu sidoo kale faahfaahiyey go’aankiisii daqiiqadihii ugu dambeeyey uu ku joojiyey weerarkii la qorsheeyey in lagaga falceliyo diyaaraddii aan duuliyaha lahayn ee Marayka ee la soo riday. Waxaanu sheegay in lagu yidhi duqayntaa waxa ku dhiman kara 150 qof oo reer Iran ah.
“Maan doonayn. Ila ma ahayn in duqayntaasi u dhigmaysay falkii Iran” ayuu yidhi.
Trump oo amray in la duqeeyo Iran, balse ka laabtay markii ay diyaaradihii hawada galeen
Tehran waxay sheegtay in diyaaraddaa aan duuliyaha lahayn ee Maraykanka la soo riday markay gashay hawada Iran subaxnimadii Khamiistii.
Waxa kale oo Trump yidhi qorshe weerar “waa diyaar oo amarkayga uun baa la sugayaa” laakiin waxa kale oo uu sheegay in uu jeneraallada weydiiyey dadka ku dhiman kari lahaa weerarkaa.
“Qaddar il bidhiqsiyo ah baan ka fikiray dabeedna waxan idhi, eeg waxay soo rideen diyaarad aan duuliye lahayn, sidaad doontaba u dhigoo, waxa ii soo baxday in 150 qof ay nusu saace gudihii ku dhiman karayeen markaan amarka bixiyey” ayuu yidhi.
Wuxu beeniyey in diyaaradihii duqayn lahaa hawada galeen oo u kaceen inay duqeeyaan bartilmaameedyo ku yaal gudaha Iran, oo sida la sheegay ay ku jiraan goobaha raadaalka iyo sawaariikhda lidka diyaaraduhu, waxaanu yidhi “maya, diyaarado hawada galay ma jirin”.
Isaga oo toos ula hadlaya hogaamiyeyaasha Iran, ayaa Trump wuxu yidhi “hub nukliyeer ah ma yeelan kartaan. Hadii aad doonaysaan in laga wadahadlo se waa arin fiican. Hadii se aad diidaan waxa idin hurran dhaqaale burbur muddo dheer idin haysan doona.”
Dhanka kale sarkaal Irani ah ayaa isna digniin ku sheegay in “weerar kasta oo lagu qaado Iran cawaaqibkiisu gobolka iyo caalamkaba saamayn doonaan”.
Ku xigeennada wasiirka arimaha dibada Iran midkood, Seyed Sajjadpour, oo BBC-da la hadlay ayaa yidhi “haddii hawada Iran lagu soo xad gudbo waanu difaacaynaa”
Waxaanu intaa ku daray, in ay iska caddahay in xubno ka tirsan maamulka Donald Trump doonayaan in la rido xukuumadda Iran.
Sida uu qoray wargeyska New York Times, madaxweynaha Maraykanka ayaa amar ku bixiyay in weeraro cirka ah lagu qaado bartilmaameedyo ku yaal Iran. Hase yeeshee go’aankaa si lama filaan ah uu uga noqday markii diyaaradihii weerarka qaadi lahaa hawada galeen.
Lama oga sababta madaxweynuhu go’aankaa uga noqday, balse wargeyska ayaa sheegay in go’aankaa aanay la dhicin wasiirka arrimaha dibedda Mike Pompeo iyo la taliyahiisa nabadgelyada qaranka John Bolton.
Ma jirto cid si rasmi ah uga hadashay waxa dhacay, laakiin New York Times wuxu sheegay in aanan laga codsan in la joojiyo baahinta warkaa taas oo caado ahaan jirtay.
Xiisadda Iran iyo Maraykanka ayaa cirka isku shareertay shalay kadib markii Iran ay soo ridey diyaarad kuwa wax basaasa ah oo uu Maraykanka leeyahay, taas oo ku fadhida $130 milyan doolar.
Wararka ayaa sheegaya in meelaha uu Trump amray in la weeraro ay ka midyihiin xarumaha raadaarka Iran iyo kuwa kale oo military ahaan muhiim ah.
Iran ayaa ku hanjabtay in ay is difaacdo, islamarkaasna aanan ka gorgortami doonin arrimaha qaar.
Guddoomiyaha Aqalka Congress-ka Nanci Palosi ayaa sheegtay in Maraykanka uusan diyaar u ahayn dagaal lala galo Iran xiligan, waxayna madaxweynaha ugu baaqday in uu ka digtoonaado in uu xaaladda cakiran uga sii daro.